I-China i-8.0W / mk yokuhambisa okuphezulu kwe-thermal i-MCPCB yabavelisi betotshi kunye nabathengisi | Kangna
8.0W / mk ukuqhuba okuphezulu kobushushu kwi-MCPCB yetotshi yombane
Uhlobo lwentsimbi: Isiseko seAluminiyam
Inani leengqimba: 1
Umphezulu: Khokela i-HASL yasimahla
Plate ubukhulu: 1.5mm
Ubunzima beCopper: 35um
Ukuqhuba kobushushu: 8W / mk
Ukumelana nobushushu: 0.015 ℃ / W.
I-MCPCB sisifinyezo sePCBs ezingundoqo ze-PCB, kubandakanya i-aluminium esekwe kwi-PCB, i-PCB esekwe kubhedu kunye ne-PCB esekwe ngentsimbi.
Aluminium ibhodi esekwe lolona hlobo luqhelekileyo. Izinto ezisisiseko ziqulathe isiseko sealuminium, iFR4 esemgangathweni kunye nobhedu. Inomaleko wokugquma obushushu osusa ubushushu ngendlela efanelekileyo ngelixa kupholiswa izinto. Okwangoku, i-Aluminium esekwe kwi-PCB ithathwa njengesisombululo kumandla aphezulu. Ibhodi esekwe ngeAluminiyam inokuthi ithathe indawo yebhodi esekwe yodongwe, kwaye ialuminiyam ibonelela ngamandla kunye nokuzinza kwimveliso engenazo iziseko zeceramic.
I-Copper substrate yenye yezona zinto zibiza kakhulu zentsimbi, kunye nokuqhutywa kwayo kwe-thermal amaxesha amaninzi angcono kunalawo e-aluminium kunye neentsimbi. Kufanelekile ukusasazeka kobushushu okuphezulu kweesekethe ezihamba rhoqo, izinto kwimimandla enomahluko omkhulu kubushushu obuphezulu kunye nobuphantsi kunye nezixhobo zonxibelelwano ezichanekileyo.
Ubushushu be-thermal layer yenye yezona ndawo ziphambili ze-substrate yobhedu, ke ubukhulu befoyile yobhedu ubukhulu becala yi-35 m-280 m, enokuthi ifezekise amandla aqhubayo ngoku. Xa kuthelekiswa ne-aluminium substrate, i-substrate yobhedu inokufezekisa ukusebenza kobushushu okungcono, ukuze kuqinisekiswe uzinzo lwemveliso.
Ulwakhiwo Aluminium PCB
Ulwahlulo lweCopper lweSekethe
Umaleko wobhedu wesekethe uyaphuhliswa kwaye ubethelelwe ukwenza isekethe eprintiweyo, i-aluminium substrate inokuthwala indawo yangoku ephezulu kune-FR-4 efanayo kunye nobubanzi obulandelayo.
Umaleko wokugquma bubuchwephesha betekhnoloji ye-aluminium substrate, edlala ikakhulu imisebenzi yokugquma kunye nokuhambisa ubushushu. Uluhlu lwe-aluminium substrate yokwambathisa sesona sithintelo sikhulu somoya kwisakhiwo semodyuli yamandla. Eyona nto ibhetele xa kusenziwa ubushushu bokuhambisa ubushushu, kokukhona kusasazeka ubushushu obuveliswe ngexesha lokusebenza kwesixhobo, kunye namaqondo asezantsi esixhobo,
Luhlobo luni lwesinyithi esiza kulukhetha njengesixhobo esincinci sentsimbi?
Kuya kufuneka siqwalasele ukwanda kokulingana kwe-thermal, ukuqhuba kwe-thermal, amandla, ubunzima, ubunzima, imeko yomphezulu kunye neendleko ze-substrate yentsimbi.
Ngokwesiqhelo, ialuminium xa ithelekiswa nexabiso eliphantsi kunexabiso lobhedu. Izinto ezikhoyo zealuminium zingama-6061, 5052, 1060 njalo njalo. Ukuba kukho iimfuno eziphezulu zokuqhutywa kwe-thermal, iipropathi zoomatshini, iipropathi zombane kunye nezinye iipropathi ezikhethekileyo, iipleyiti zobhedu, iipleyiti zentsimbi ezingenasinxibo, iipleyiti zentsimbi kunye neepleyiti zensimbi yesilicon nazo zinokusetyenziswa.
Ukusetyenziswa kwe I-MCPCB
1.Audio: Igalelo, imveliso yokukhulisa, ulungelelwaniso olulinganisiweyo, isandisi-lizwi sesikhulisi, umbane wesikhulisi.
2. Ukunikezelwa kwamandla: Ukutshintsha umlawuli, isiguquli seDC / AC, umlawuli we-SW, njl.
3.Imoto: Umlawuli we-elektroniki, ucinezelo, isilawuli sokuhambisa umbane, njl.
4. Ikhompyuter: Ibhodi ye-CPU, idiski yediski, izixhobo zonikezelo lombane, njl.
5. IiModyuli zaMandla: Inverter, solid-state relays, rectifier bridges.
6. Izibane kunye nezibane: ukonga umbane, iintlobo ngeentlobo zemibala egcina umbane ye-LED, izibane zangaphandle, izibane zeqonga, ukukhanya komthombo
I-8W / mK i-aluminium ephezulu yokuqhuba kwe-aluminium esekwe kwi-PCB
Ubukhulu copper: 35um
Ukumelana nobushushu: 0.015 ℃ / W
Uhlobo lwentsimbi: Aluminium isiseko
Inani leengqimba: 2
Uhlobo lwenkqubo: Ukwahlulahlula i-Thermelectric ukwahlulahlula ubhedu
Ukuqhuba kobushushu: 398W / mk
Umxholo uyilo: Isikhokelo sesinyithi esithe nkqo, indawo yoqhakamshelwano ngebhedu inkulu, kwaye iingcingo zincinci.
Egqithileyo I-1.6mm prototype ekhawulezileyo ye-FR4 PCB
Okulandelayo: Thin Polyimide bendable FPC nge FR4 stiffener